घटना र विचार, न्युज डेस्क !6months ago October 20, 2019
राणाशासन पतन भए पनि चाकडी यथावत् छ । धेरैजसो मान्छे व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाकडी बजाउँछन् । व्यवस्था फेरियो, संस्कार फेरिएन । हिजोका जङ्गलीले यतिबिघ्न फड्को मारिसक्दा आज नेपाली उस्ताकोउस्तै ।
जो चोर उसको ठूलो स्वर । कर्तव्यच्युत छ, अरूलाई कर्तव्यको पाठ पढाउँछ । हाल जनता निराश छन्, विकल्प खोज्दाछन् । नेता धारेहात लगाउँदो छ । आफू जनतालाई निराश तुल्याउने अनि विकल्प खोज्यो भनेर सराप्नु हुन्छ र ? सर्वप्रथम नेताजीहरू आफू सच्चिनुपऱ्यो । आफू सात पुस्तालाई सम्पत्ति कमाउने, जनतालाई नागरिक हुन नदिएर दरिद्र तुल्याउने । म त भन्छु– जुन दिन नेपाली जनताले नेताको पुच्छर हुन छोड्छन् त्यही दिनबाट विकासको थालनी हुन्छ । करले ढाड सेक्यो, सुविधा केही छैन । करको दुरुपयोग देख्दा मन धरधरी रुन्छ । जनताले यचोचित कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गर्नु कर्तव्य हुन्छ । कर तिरेपछि जनताले स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि सुखसुविधा पाउनुपऱ्यो नि । युरोप–अमेरिकातिर राष्ट्रसेवकहरू नागरिकलाई कसरी सुखसुविधा दिनुपर्छ भनेर दत्तचित्त हुन्छन् । हामीकहाँ त उनीहरू लाठसाब पल्टिन्छन् । विवादित नहुनुपर्ने संस्थाहरू विवादित भएको देख्दा ताजुब लाग्छ । अनि भन्नुस् त हाम्रो मन राख्ने ठाउँ कहाँ छ ? जति बखाने पनि हाम्रो पीडा कम भएको छैन । आजलाई मैजारो । अस्तु ।